Shirka Caafimaadka Qaranka oo la soo xiray (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Caafimaadka Shirka Caafimaadka Qaranka oo la soo xiray (Sawiro)
Waxaa maanta oo Tallaado ah la soo geba-gebeeyay shir looga hadlayay Caafimaadka dalka Soomaaliya.
Shirka ayaa ahaa mid soconayay muddo labo maalmood ah, kaasi oo ay ka qayb-galeen mas’uuliyiin ay ka mid tahay wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Fowsiyo Abiikar Nuur.
Shirka ayaa sidoo Kale waxaa ka qayb galay mas’uuliyiin ka socday Qaar ka mid ah Hay’adaha Qaramada Midoobay oo ay ka mid yihiin UNOPS iyo UNFPA.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Soomaaliya, ayaa shirka soo qaban qaabisay, ayadoo ay maal-galisay Hay’adda (AICS) – the Italian Agency for Cooperation and Development- oo ah Hay’adda dowladda Telyaaniga u qaabilsan hormarinta iyo isku-dubarididda.
Muddadii shirka Caafimaadka Qaranka Soomaaliya uu labada maalmood socday waxaa looga hadlay sidii loo hormarin lahaa adeegyada Caafimaadka Soomaaliya, kuwaasi oo tan iyo burburkii dowladdii dhexe aan dadka Soomaaliyeed u baahi qaban inay helaan.
Shirka ayaa waxaa maanta soo xirtay wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fowsiyo Abiikar Nuur, sida lagu daabacay barta Twitter-ka ay Ku leedahay wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshadda Ee Dowladda Fedraalka Soomaaliya Dr Fawizya abikar Nur Ayaan waxay si rasmi ah u xiray Shirka Caafimaadka Qaranka
@Caafimadka @AbikarDr pic.twitter.com/PlKwhc6p70
— Ministry of Health- Somalia (@MoH_Somalia) December 12, 2017
Burburkii dowladdii dhexe ka dib
Dalka Soomaaliya, oo ah dal burbur Ku jiray muddo Ku dhow 28 sano ayaa warbixinada Caalamiga ah ee dhanka Caafimaadka waxaa Soomaaliya ay Ku tilmaameen inuu ka mid yahay dalalka ugu badan ee haweenkooda iyo carruurtooda oo fara badan ay u geeriyoodan xanuunada ugu fudud ee la daawayn karo.
Burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ka dib adeegyada caafimaadka dalka waxaa la wareegay hay’adaha QM ee (UNICEF) iyo (WHO) kuwaasi oo wali door wayn Ku leh howlaha caafimaadka dalka inkastoo Soomaaliya ay leedahay dowlad dhexe taasi oo haatan awood u lahayn inay bixiso adeegyada aas-aasiga u ah nolasha Soomaalida, sida Caafimaadka.
Dalka wali kama jiro nadaamka Caafimaadka bilaashka ah, sidoo Kale ma jiraan ama haddii ay jiraana waa ay yar yihiin cisbaatallo dowladda Soomaaliya ay maamusho.
Dowladdo badan ayaa Soomaaliya ka taageera dhinaca caafimaadka ayagoo soo marsiinaya hay’adaha QM.
Dhowaan dowladda Japan, ayaa Soomaaliya ugu deeqday $2 Milyan oo Dollar oo loogu talo galay dhinaca caafimaadka.
Dhibaatooyinka Caafimaadka Soomaaliya oo wali taagan
Carruur Soomaaliyeed oo da’doodu ay ka hoosayso Shan sano ( lahaanshaha Sawirka WHO)
Dhibaatada ugu badan ee ay wajahaan dadka Soomaaliyeed ayaa ah cudurada faafa, sida shuban biyoodka oo haatan halis ay ugu jiraan malaayiin Soomaali ah, sida ay sheegay WHO.
WHO, waxaa ay sheegtay in 5.5 Milyan oo ruux oo Soomaali ah ay qarka u saaran yihiin halista cudurka Shubanka (Cholera).
Tiradan kala bar waxaa ay (WHO) ay sheegtay in ay yihiin haween iyo carruur da’doodu ay ka hoosayso Shan sano.
Dadka ugu daran
Halista ugu badan waxaa wajahaya dadka barakacayaasha ah iyo bulshooyinka tabarta daran kuwaasi oo horay ay u wiiqeen Saboolnimo iyo nafaqo dari, sida ay sheegayso Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka Adduunka ee (WHO).
Previous articleBaarlamaanka Soomaaliya oo maalintii labaad ka shiray miisaaniyadda 2018-ka (Sawiro)
Next articleMaxaabiis Soomaaliyeed oo ku xirnaa Seychelles oo Muqdisho laga soo dajiyay (Sawiro)